Hodges Yunivhesiti Inotengeka! »Wona Kudzidza uye Mari
Hodges University Kudzidza Mari uye Mari
Welcome to Hodges University! Dzidzo yeHodges uye mubhadharo zvinoramba zviri zvimwe zvakaderera pakati pemasangano akazvimirira mudunhu reFlorida. Dzidzo inogona kuderedzwa nedzidzo, rubatsiro, uye chikoro chekudzidzira. Zvikwereti zveFederal uye zvipo, pamwe nehurumende rubatsiro rwemari kubva kudhipatimendi redzidzo, zviripowo.
Ngatitorei Chaicho - Chaunofanira Kuziva Nezve Yakavanzika Mari Yekudzidzira Mu An Apples kune maApple Kuenzanisa.
Wanga uchiziva here kuti pane mirau yakasiyana yekuti mamayunivhesiti eruzhinji neakazvimirira anodikanwa kuposita chidzidzo chavo? Masayunivhesiti eruzhinji anotenderwa kutumira mari dzemambure, idzo dzinowanzo kunzi "In-State Tuition," nepo masangano akazvimirira asingabatsiri achifanirwa kunyora pasi rose paawa yechikoro. Pamusoro pezvo, mayunivhesiti eruzhinji haasi akajeka nguva dzose pamubhadharo wekuwedzera uye mhosva dzinogona kuongororwa kumudzidzi mushure mekunge vanyoresa. KuHodges, tinoda kuona kuti vadzidzi vanonzwisisa zvakajeka kukosha kwedzidzo yavari kuwana.
Mudzidzi ari kuenzanisa chirongwa cheRN pane ese Hodges University uye munharaunda koreji. Mukuenzanisa-kumusoro-musoro, Hodges inoita kunge inodhura zvakanyanya kuchirongwa chimwe chete. Izvo izvo mudzidzi asinga zive ndeye yemunharaunda koreji iri kupa makore maviri RN degree apo Hodges iri kupa mushandirwi-akasarudzika uye pamwe anodiwa Bachelor's yeSainzi muNursing. Chirongwa chedu chakabatanidzwawo nedzidzo, mabhuku, marabhu, yunifomu, uye stethoscope, nepo koreji yemunharaunda ichizobhadharisa imwe mari yezvinhu izvi. Pamusoro pezvo, nepo zvese zvirongwa zvichidikanwa prerequisite makosi, chirongwa chedu chinopihwa nekumhanyisa mhanyisa, mune diki kirasi saizi yekumisikidza, uye inodzidziswa mukati memaawa apo vakuru vanoshanda vanogona kuenda.
Mudzidzi achienzanisa Hodges University uye yeruzhinji 4-gore yunivhesiti anoona yakashambadzirwa mwero we, paavhareji, $ 240 pa kiredhiti awa yeiyo undergraduate degree. Zvichienzaniswa neHodges 'yakatumirwa mwero we $ 595, izvi zvinoita senge tarenda dhiri, asi ngaticherei zvakadzama zvishoma. Kutanga, mwero iwoyo unoshanda chete kana iwe uri mudunhu. Avhareji mitengo yevadzidzi vehurumende vari kuenda kuyunivhesiti yemakore mana yunivhesiti vari, paavhareji, vangangoita madhora mazana masere. PaYunivhesiti yeHodges, iwe unobhadhara zvakaenzana pachikwereti cheawa chikwereti kubva chero kupi zvako pasi.
Hodges 'base rate iri $ 595, zvisinei neyedu yepakati pamwe nemana modhi unowana zvikwereti gumi nematanhatu pamutengo wegumi nemaviri. Pamusoro pezvo, kana iwe uchigara mudunhu reFlorida, unogona kungozvitsvakira iyo EASE Grant, inova ingangoita $ 16 ye 12-1420. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kubhadhara zvishoma seUS $ 2020 / kiredhiti awa. Zvino, iwe paunowedzera paGI Bhiri, zvechiuto uye zvekambani kuderedzwa, yero ribhoni zvirongwa, basa sosi yekubhadhara mari, masomo, Bright Futures, Pell Grant mibairo, uye zvemukati kudzidza, vamwe vadzidzi vanobhadhara zvishoma kune chero chinhu zvachose.
Pasina kutaura, mune yeruzhinji 4-gore yunivhesiti, iwe unogona kuenda kumakirasi aine anosvika 200-350 vadzidzi vanodzidziswa nemudzidzi akapedza kudzidza kwemakore ako maviri ekutanga. KuHodges, edu emakirasi mashoma pakati nepakati gumi nemaviri uye anodzidziswa neyakahwina-kuhwina fakisheni ine chaiyo-nyika ruzivo Mushure mezvose, kutariswa uye rutsigiro iwe rwaunogashira inogona kuve iyo sarudzo yekuita mukubudirira kwako.
Mumwe mugari weFlorida uye Anoshanda Anoshanda nhengo yeHodges
Undergraduate Rate = $ 595 paawa yechikwereti x 12 FT Maawa echikwereti = $ 7140- iyo EASE kupihwa iyo yanga iri $ 1420 pasemester / ($ 2841 pagore) = 5720.00
Iwe unogona zvakare kuwana 16 kiredhiti pamutengo iwoyo neyedu Core + 4 chirongwa! $ 5720/16 Zvikwereti = $ 357.50 - $ 250 Anoshanda Anodzikisira Mauto = $ 103.75 paawa yechikwereti.
* Mari yechikoro inogona kusiyana zvichienderana nemamiriro emunhu uye chirongwa chavo chakasarudzwa chekudzidza.
Rega Isu Tinokodzera Kugamuchirwa uye Mari Yekubatsira Varongi Vabatsire Iwe Kubhadhara Remangwana Rako. Nyorera Nhasi!
Undergraduate Chidzidzo cheZvese Kiredhiti Kosi Makosi: $ 595 paawa yechikwereti
Vakapedza Kudzidza Tuition yeVose Kiredhiti Kosi Makosi: $ 830 paawa yechikwereti
Chirungu seChipiri Mutauro Chirongwa: $ 295 paawa yechikwereti
Intensive English Courses: $ 335 paawa yechikwereti.
Cohort-based Chirongwa Chidzidzo:
BSN Core Chirongwa Chidzidzo: $ 17,200.00 pachikamu
BSDH Core Chirongwa Chidzidzo: $ 17,200.00 pachikamu
EMS Core Chirongwa Chidzidzo - Track 1: $ 10,166.67 pachikamu
EMS Core Chirongwa Chidzidzo - Track 2: $ 9,700.00 pachikamu
EMS Core Chirongwa Chidzidzo - Track 3: $ 9,183.33 pachikamu
EMS Core Chirongwa Chidzidzo - Track 4: $ 8,433.33 pachikamu
MAcc Core Chirongwa Chidzidzo: $ 9,966.67 pachikamu
PTA Core Chirongwa Chidzidzo: $ 10,933.33 pachikamu
PN Core Chirongwa Chidzidzo: $ 36,980.00 pachikamu
CMHC Core Chirongwa Chidzidzo (Cohort - Nzira): $ 9,271.43 pachikamu
CMHC Core Chirongwa Chekudzidzira (Asiri-Cohort) **: $ 830 paawa yechikwereti
UPOWER ™ Kunyoresa Kunze **: $ 3,000.00 pamwedzi mitanhatu
UPOWER ™ Kunyoresa Kunyoresa **: $ 3,500.00 pamwedzi mitanhatu
Nei Uchisarudza Hodges University?
Diki Diki Makirasi
Kukurumidzisa Kupedza Kudzidza Mano
Zvirongwa Zvakasiyana-siyana Zvekutumira Zvinokodzera Hupenyu Hwako
Proven Workforce-Yakavakirwa Kudzidziswa NeMubairo Vanokunda Vanapurofesa
Mwedzi Yekutanga Mazuva
Tora Kirasi Imwe Panguva YeMazhinji Makosi
Tanga Yako #MyHodgesStory Nhasi!
Dzidza Nezve Inowanikwa Yemari Rubatsiro, Scholarship, Aliiances uye Discount Zvirongwa
Mari Yevadzidzi Yevadzidzi: $ 250 pachikamu
Mabhuku / Mari Yekushandisa (kana isina kuisirwa): $ 0 - $ 400 panzira, pachikamu
* Kuti uwane yakakwana kudzidza uye purogiramu yemubhadharo, kusanganisira zvidzikiso, ndapota ona izvozvi Kunyoresa Mitemo & Mamiriro nokuti mamwe mashoko.